Ndị na-agba ịnyịnya mmiri na-ekiri oyi na-acha uhie uhie - elu, ọcha, denim, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na aji
Ụmụ nwanyị na-eji ịnyịnya na-acha uhie uhie - ụdị ejiji kachasị mma na ihe ha ga-eyi?
Nchikota akpụkpọ ụkwụ egwuregwu na ngwụcha nke ọma gosipụtara nkwupụta dị ịrịba ama nke ntụpọ ntụsara ahụ n'otu nhazi. Taa umuaka ndi nwanyi na aji - nka abughi nani ihe nke oge oyi, kamakwa ogucha ogwu ogugu kwa ugbua. Na agba nke echiche echiche ga-enyere onye ọ bụla fashionista mesie ike.
Ụmụ nwanyị na-eji aji ọkụ
Na nchikota kachasị ọhụrụ nke akpụkpọ ụkwụ na-eji nwayọọ eme ihe ọ bụghị naanị dịka onye na-ekpo ọkụ, kamakwa dịka ihe ịchọ mma. Ndị kachasị ewu ewu bụ ndị sneakers na anụ ọkụ na ebe a dị oke iche iche - site na mkpuru ego na ewu, sheepskin, aja na ezigbo raccoon, fox, rabbit na ọbụna mink. Otu ihe dị mkpa dị na nkedo nke akpụkpọ ụkwụ bara uru bụ ụdị onwe ya na ihe ndị ọhụrụ kachasị dị ka ndị sneakers ndị inyom na aji:
Ụmụ nwanyị na-eji ịnyịnya na-acha uhie uhie n'elu ikpo okwu . Nnukwu oké ọkụ wee ghọọ ọ bụghị naanị maka egwuregwu. N'ijikọta ya na ejiji dị nro, ngwa ndị bara uru na-emesi obi ụtọ nụ ụtọ na obi ike nke fashionista.
Enweghị oghere . Ngwa ndị dị mma ma dị mma n'anya na-enweghị ngwa ngwa. N'ebe a, ajị anụ ahụ nwere ike imecha ma elu, ma naanị ụkwụ ma ọ bụ ikiri ụkwụ.
Ụmụ nwanyị na-eji ịnyịnya na-acha uhie uhie . Na oge oyi, ụdị akwa a na-emechi emechi na-abawanye uru. N'ihe a, ihe ịchọ mma ahụ mara ezigbo mma n'ụdị nke dị egwu.
Na backlight . A na-eji ihe ọkụkụ na-ewu ewu na-ewu ewu na-enye ya ihe ngosi dị ụtọ. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya iji mesie nkwenye gị na ụdị onye ọ bụla aka.
Sneakers na aji n'elu
Ihe ngwọta kachasị mma bụ ihe ịchọ mma n'elu akpụkpọ ụkwụ ahụ. Ụmụ nwanyị na-eji ajị anụ na-acha uhie uhie n'elu na-anọchite anya ma ụdị ma dị elu. A na-atụgharị ndị na-emepụta ihe na-achacha achacha na-achacha otu ụcha ma na-eme ka ụdị mbipụta ahụ na-eme ka ihe na-acha ọcha. Ihe ngwọta nke kachasị mma bụ ọlakọcha nke ọla nwere mgbachi ọrụ. Na nke a, ọ dị mkpa ịgbakwunye na ntinye Velcro dị nro, kpuchie mkpọchi ma ọ bụ rivets. Karịsịa nkecha, anụ ahụ dị n'elu lekwasịrị anya na ngwaahịa.
Ndị na-ekwo ekwo na-egbuke egbuke
Omume nke nnakọta ikpeazụ bụ ihe mma nke akpụkpọ ụkwụ kezhualnoy n'ụdị bọọlụ dị nro. Pom-poms nwere ike ime ka ọ dị larịị ma ọ bụ icho mma n'elu. Ndị na-emepụta nchọpụta gosipụtara ọnụ ọgụgụ ahụ, ngwọta agba na nha nke tinye-ons. Ndị kachasị ejiji bụ ndị na-agba aji na pastel shades - pink, white, Mint, lilac na ndị ọzọ. A na-emegharị ihe ndozi ọzọ site na nkwado ígwè na mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ ikiri ụkwụ, ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha, na ndị nwere mmasị nke ndị na-emepụta ihe ndị mara mma na-enye ngwa ndị nwere squins na rhinestones.
Sneakers na ire ọkụ
Ụdị ihe ngosi na-adọrọ adọrọ ma dị mma nke nwere ihe dị nro dị n'okpuru lacing ma ọ bụ velcro. Echiche dị iche iche mara mma. Ndị na-eme ihe nkiri na-ekpuchi ikpo ya n'igwe na-egbuke egbuke ma ọ bụ nke na-eto eto, nke na-atụgharịrịrị agba agbacha achacha ma ọ bụ nke acha-acha ọbara ọbara nke isi. A na-eji ihe ndozi eji ire eme ihe ọ bụghị naanị maka ọdịdị oge nke oge, kamakwa maka ndị a gwara agwa. Ndị na-ekwo ekwo na ajị anụ ahụ ga-abụ olu na-egbuke egbuke na mbiet ahụ, ma ọ bụrụ na njedebe na-anọchi anya nnukwu ikpo okwu. N'okwu a, ihe onwunwe - agbada, Arctic fox na ndị ọzọ - ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ na aji
Ihe kachasị dị irè ma bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na oge nsị na ájá bụ akpụkpọ anụ. Taa, ma ngwa ngwa na akpụkpọ ụkwụ si n'ọnọdụ ndị dị mma na-ewu ewu. Ọ bụrụ na ịhọrọ njedebe, dị ka nkọwa zuru ezu, ọ bara uru ịnọ na monochrome laconic agba. Iji gbakwunye ụda na-egbukepụ egbukepụ, ṅaa ntị na ụdị ndị na-ebipụta akwụkwọ, dị iche iche mkpụmkpụ, elu lacquered n'elu. Na oyi na-atụ n'oge oyi, ndị inyom na-agba ịnyịnya na-acha uhie uhie na-aghọ n'ezie. Na oge na-ekpo ọkụ, a na-eme ihe ngosi dị mma.
Denim sneakers na aji
Ihe ngwọta kachasị maka ntorobịa ma ọ bụ ụta obodo kwa ụbọchị ga-abụ ngwaahịa nwere oke denim. N'okwu a, ezigbo ihe ndozi ga-abụ ihu, ntinye dị ọcha nke agba ọcha ma ọ bụ n'okpuru agba nkịtị. A na-egosi ndị na-agba ịnyịnya na-acha ọcha na Denim ma na-acha anụnụ anụnụ na agba. Nlecha anya nke ọma, mmetụta nke nkwụsị, ngwa. Maka ngwa ngwa ndị dị otú a, enwere n'elu ikpo okwu dị elu, na-agbanye ọnụ na ọbụna ikiri ụkwụ. Ngwurugwu mara mma nwere ike ịkwa mma, karịsịa na ụzọ dị iche iche nke ekekọta.
Ndị na-agba oyi na-acha uhie uhie
Mmezi nke ihe oyiyi ahu n'ile egwuregwu ruo otutu afo ka anaghi ele ya anya dika ihe omuma maka nkuzi ndi okachamara. Ya mere, ụdị ndị a nwere ike ịchọta na nchịkọta nke ụdị, ọ bụghị nanị na ọ bụ ọkachamara na ntụrụndụ, ma na-egosikwa uwe na ejiji dị mma kwa ụbọchị. Ụmụ nwanyị na-ejiji aji na-ekpo ọkụ n'oge oyi bụ ndị na-echefu echefu maka ihe ngosi nke ụdị ndị a ma ama:
Dolce & Gabbana . Aja a nwere mmasị na ike ya ijikọta kwa ụbọchị na okomoko. Ndị na-emepụta ihe na-eji ihe ndozi dị nro na-egbukepụ egbuke egbuke, na-achọpụta ụdịdị n'elu ikpo okwu na otu traktọ naanị.
Louis vuitton . Otu ihe dị iche iche nke ika a bụ iji ejiji na-eme ihe dị iche iche. Ndị na-emepụta ihe ndị na-ewu ewu na French na-enye ụmụ nwanyị na-emepụta ihe dị iche iche na-agba agba.
Puma . A na-ekwusi ike na ngwaahịa nke German ika na arụmọrụ. A na-eji ụdị Puma na-emepụta nke ọma, mmetụta nke thermoregulation ma na-eme ezigbo akpụkpọ anụ ma ọ bụ suede. N'ebe a, mkpuchi ahụ dị mkpa, ma ọ bụ ọkụ.
Gucci . Ngwaahịa sitere n'aka ndị Ịtali bụ nchịkọta dị iche iche nke ejiji na ihe bara uru. A na-eji ụdị akpụkpọ anụ na-emepụta ihe dị iche iche na-emepụta ụdị ihe eji emepụta aha Gucci na mkpụmkpụ nke a na-etinye na rabbit ma ọ bụ mink.
Ụlọ ọrụ ụwa a ma ama, bụ nke na-enwetawanye ọtụtụ ewu ewu, na-etinye uche pụrụ iche n'àkwà akpụkpọ ụkwụ. A na-enye ndị na-acha uhie uhie hiri nne New Balance na aji ka ha na-emepụta ma ọ bụ n'ụdị ihe eji eme ihe. Mkpọ ọkụ na-ekpuchi ngwa ngwa n'ime na ọbụna na njikwa. Ihe dị iche iche bụ nhọrọ nke agba. Ndị na-emepụta ihe ji obi ike jikọta onyinyo na-egbukepụ egbukepụ ma na-enye ọdịiche dị iche iche nke ejiri azụ na nke dị jụụ. Na nchịkọta nke Ọhụụ Ọhụrụ, nwa agbọghọ ọ bụla ga-achọta ngwọta dị mma maka onwe ya.
Adidas sneakers oyi na aji
A na-eji ụdị ejiji na-eme ihe atụ maka oyi site na egwuregwu a ma ama Adidas. Anwụrụ anwụrụ mechiri emechi ma ọ bụ ikpo ájá. Ndị na-emepụta ihe na-eji ihe onwunwe anụ ahụ eme ihe. Ụmụ nwanyị na-ejiji akpụkpọ anụ Adidas na-acha uhie uhie na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ. Ị nwere ike ịchọta ọdịiche dị iche iche na ihe mma nke ihe onwunwe - usoro ihe eji eme ihe, ngwakọta nke akpụkpọ anụ na ihe na-edozi ahụ, nke a na-ejikọta akpụkpọ anụ na ihe ndị ọzọ. Ihe ngwọta agba dị iche iche. Na-emekarị, echiche doro anya na-acha ọcha na agba chaa chaa mara mma.
Uwe inyinya oyi nke nwanyi Nike na aji
A na - ekewapụta ihe ndị American American na - acha ọcha akpụkpọ ụkwụ. Nke mbụ bụ ngwa maka ejiji kwa ụbọchị. Ebe a mesiri ike na thermoregulatory Njirimara na ike oké naanị. Ndị na-emepụta ma na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ ma na-emepụta ngwaahịa na-eme ka ọ dị mma. Akụkụ nke abụọ gụnyere igwe ejiji oyi na-agba chaa chaa na egwuregwu maka ịgba egwu n'okporo ámá. Ụdị ndị dị otú ahụ dị mma nke ọma, ọbụnadị n'azụ mmiri kachasị njọ ha agaghị ekwe ka ụkwụ ha kwụsị ifriizi.
Ndị na-eji ịnyịnya na-agba oyi oyi Reebok na aji
Ihe dị iche iche nke ngwaahịa ndị sitere na Reebok bụ ụdị kpochapụ. A na-ejikọta ogwe aka dị nwayọ a na-ehicha ya ma jiri nkwonkwo ụkwụ mechie ya. N'ihi usoro oge ochie, a na-ekesa ibu dị na ụkwụ ọbụla, nke na - enye nkasi obi otu narị percent. Ndị na-emepụta ihe adịghị eji lint maka ebumnuche e ji achọ. Sneakers Reebok na aji - akpụkpọ anụcha maka sọks nọ n'ọrụ kwa ụbọchị. Na laconic na monochrome agba na-eme ka ndị dị otú ahụ zuru ụwa ọnụ n'okpuru uwe ọ bụla.
Kedu ihe ị ga-eji ejiji aji?
Nhọrọ kachasị mmeri nke uwe maka akpụkpọ ụkwụ egwuregwu na-agba ọkụ ga-abụ jeans. Na ebe a, akpụkpọ anụ ọ bụla, ụmụ nwoke, ndị agadi, na-egbukepụ ọkụ. A na-ewere leggings ma ọ bụ leggings dị ka ihe ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eburu uwe ogologo ọkpa ahụ na njedebe, mgbe ahụ ụkwụ ga-ahụ anya. Ka ị ghara ile anya nke ọma, jikọta ụdị ejiji na ụmụ nwanyị na-acha ọcha sneakers na aji. Dị ka uwe elu , akwa jaket, ogige ntụrụndụ ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi zuru oke zuru oke. Echefula ihe mgbakwunye ihe ejiji - okpu isi, nke a na-agbanye ọkụ, ma ọ bụ ụzụ, ma ọ bụ ihe yiri ya.
Aiwory akwa akwa
Nubuck akpụkpọ ụkwụ
Oge oyi nke ụmụ nwanyị
Ịzụ ahịa na Berlin
Agba akpụ ụkwụ zuru oke na elu elu
Uwe ndị ntorobịa maka ụmụ agbọghọ
Galoshes na akpụkpọ ụkwụ
Oge ịgba agba ụmụ nwanyị
Uwe ojii na-emeghe azụ
Akpụkpọ ụkwụ maka ụbịa
Nwanyi oyi nke ndi nwanyi Finnish na sintepone
Mmiri 2017 - mgbaàmà na ọgwụgwọ nke ụdị nje virus ọhụrụ
Egwuregwu ụmụaka ndị oyi na-eme n'oge oyi
Ihe oriri kachasị njọ n'ụwa
Kedu ihe mkpuchi dị?
Ihe osise a na-eme n'ime ime ụlọ ahụ
Brick n'ime ime ụlọ ahụ
Ejighị ọcha - ọdịnaya calorie
Olee otu esi enyere nwatakiri aka ichota okpokoro okpukpu?
Ndi nwanyi di ime nwere ike ikiri ikiri ụkwụ?
Mgbu ahuhu na ime ime - nsogbu nke nwatakiri a
Beshbarmak si anụ ịnyịnya
Cucumbers na ketchup "Chile" - Ezi ntụziaka maka obere nri snack
Cardigan Lalo - 32 foto nke ejiji oyiyi na cardigan na Lalo style
Ònye ka ụta lipstick ahụ dị?
Na-eme ka garlic na galik na teepu frying